Dare Rinorambidza Hurumende Kubhadharisa Vanhu Madhora ekuAmerica
Nezuro, Chitatu, dare repamusoro rakaisa parutivi mutemo wechimbi chimbi, kana kuti Statutory Instrument 161 of 2020, wakange wadzikwa gore rapera negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu waisungira vanhu munyika kuti vatenge ma’number plates’ emotikari dzavo vachishandisa madhora eku America.
Justice Chinhamora vakatonga kuti bazi rezvekutakurwa kwezvinhu harina masimba ekubhadharisa vanhu nemari yemadhora eku America, vachiti izvi zvinogona kuitwa negurukota rinoona nezvemari bedzi.
Justice Chinamora vakati bazi rezvekutakurwa kwezvinhu rinofanirwa kudzorera vanhu mari dzavo.
Tabata munyori mubazi rezvekutakurwa kwezvinhu, VaThedius Chinyanga, kuti tinzwe divi rebazi ravo vakati vachataura neStudio 7 mushure mekuona zvese zviri mugwaro raJustice Chinamora.
Izvi zvaitika panguva iyo hurumende ichishorwa zvikuru pamusoro pekuti mapasipoti ave kubhadharwa nemari yekunze.
Svondo rapera, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko, Amai Monica Mutsvangwa, vakazivisa kuti mitengo mitsva yemapasipoti vachiti mapasipoti ese anofanirwa kubhadharwa ne madhora eku America.
Izvi zvakashatirisa vazhinji uye zvakashorwa nebato rinopikisa, reMDC Alliance.
Sachigaro veMdc Alliance mudunhu reNorth America, VaTawanda Dzvokora, vaudza Studio 7 kuti mutongo wapiwa naJaji Chinamora wakanaka zvikuru, vachiti hurumende inoda kuti vanhu vashandise madhora eku America asi iyo yakarambidza kushandiswa kwawo munyika makore maviri apfuura.
VaDzvokora vati hurumende inofanirwa kutanga yapa vanhu mihoro inoita kuti vararame zvakanaka isati yakwidza mitengo kana kumanikidza vanhu kuti vabhadhare zvinhu nemadhora ekuAmerica.
Asi sachigaro veZanu-PF mudunhu reNorth America, VaRegis Charumbira, vanoti hurumende iri kuita zvakanaka chose nekuti zvinoshandiswa pakugadzira mapasipoti zvinobva kunze kwenyika uye zvinotengwa nemari yekunze.